Weeraryahanka Chelsea ee Olivier Giroud oo qarka u saaran inuu heshiis la gaaro mid ka mid ah Kooxaha Waa weyn ee Talyaaniga – Gool FM
(London) 14 Dis 2019. Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa qarka u saaran inuu heshiis la gaarno naadiga Inter Milan ee dalka Talyaaniga sida uu ku waramayso Jariiradda L’Equipe.
33-sano jirkaan ayaa hoos uga dhacay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee garoonka Stamford Bridge inta uu ka hoos ciyaarayo Tababare Frank Lampard, waxaana kaliya uu ciyaaray todobo kulan xilli ciyaareedkan.
Waxaa markii dambe la la xiriiriyay inuu u dhaqaaqayo Kooxda Inter bisha Janaayo, kuwaasoo u baahan xoojinta dhankooda weerarka, maadaama Alexis Sanchez uu dhaawacmay.
Haatan Jariiradda L’Equipe ee ka soo baxda Faransiiska ayaa warinaysa in Giroud uu qarka u saaran yahay inuu heshiis shaqsi ah la gaaro Nerazzurri.
Si kastaba ha ahaatee, Kooxda Beneamata ayaa wali u baahan inay kala xaajooto Chelsea lacagta ku aaddan iibkiisa.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa doonaya inuu si joogto ah u ciyaaro ka hor ciyaaraha Euro 2020, waana uu ku heli karaa inuu ka ciyaaro Europa League kaddib markii Inter Milan ay ka soo hartay tartanka Champions League.